Maamulka Degmada Baraawe Oo Ka Warbixiyay Xilliga La Bilaabayo Dhismaha Garoonka Degmadaasi – Goobjoog News
Maamulka degmada Baraawe ee gobalka Shabellaha Hoose ayaa faah faahin ka bixiyay qorshaha lagu doonayo in lagu dhiso garoonka diyaaradaha degmadaasi, kaasi oo horay uu u dhegax dhigay madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Bashiir Maxamed Yuusuf oo ah sii hayaha xilka gudoomiyaha ee degmadaasi ayaa u sheegay Goobjoog News, in dhamaadka bishaan July la bilaabayo dhismaha garoonka, islamarkaana howsha loogu diyaar garoobayo ay soo dhamaatay.
“Bishaan aynu ku guda jirno dhamaadkeeda waxaa la bilaabayaa dhismaha garoonka magaalada Baraawe, sida ay inoo sheegeen maamulka iyo dowladda, waxaana la filayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu dhameeyo” ayuu yir Bashiir Maxamed.
Waxa uu sidoo kale mas’uulkaan sheegay in dib u dhis ballaaran uu ka socdo degmada Baraawe, maadaama ay tahay caasimadda maamulka Koonfur Galbeed, dhawaanna loo guuri doono waa sida uu hadalka u dhigaye.
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa mar uu tagay degmada Baraawe, waxa uu dhegax dhigay dhismaha garoonkaasi, oo uu sheegay in wax badan uu qaban doono.
Faah Faahin:- Ciidamada Kusii Siqaya Degmada Baardheere Iyo Al-shabaab Oo Dagaallamay